Ngwa ngwa ngwa: Anyị nwere ike ịla ezumike nka nfuli ojii na kapeeti uhie? - Ụdị
Ngwa ngwa ngwa: Anyị nwere ike ịla ezumike nka nfuli ojii na kapeeti uhie?
Eziokwu: Enwere ọtụtụ akpụkpọ ụkwụ mara mma dị ịtụnanya. Eziokwu: Ọ bụrụ na ị bụ onye ama ama A-list, ị nwere nhọrọ nke ụdị ọ bụla ịchọrọ iyi. Eziokwu: Waaaaay ọtụtụ n'ime ha na -amalite nfuli ojii ochie na -agwụ ike mgbe ha kụrụ kapeeti uhie.
CANNES, FRANCE - MAY 22: Kirsten Dunst na -aga emume 'Les Bien -Aimes' na mmechi n'oge ememme ihe nkiri Cannes nke 64 na Palais des Festivals na Mee 22, 2011 na Cannes, France. (Foto nke Venturelli/WireImage)
Mgbe m hụrụ foto Kirsten Dunst n'abalị ọ rutere ihe nrite kacha elu na Ememme Nkiri Cannes, ọ fọrọ nke nta ka obi m mebie. Ntutu isi ya enweghị ntụpọ, etemeete ya enweghị ntụpọ, uwe Chanel ya na-acha ọbara ọbara kapeeti na-acha uhie uhie ... Ha gbakwunyere ihe na -adịghị mkpa nke ịdị arọ n'ile anya niile, dị ka mousse chọkọlet dị nro nke jalepenos tụrụ na -enweghị atụ! Ma ọ bụghị ya bụ kpakpando mbụ iji nweta nfuli ojii mgbe ihe ọ bụla ọzọ-ịgba ọtọ, ọla, hue na-enweghị ntụpọ-ga-adị mma karịa:
Ha bụ nhọrọ na -anọpụ iche maka ọtụtụ ndị ama ama, a na m ekwupụta agha megide ha. Biko, ndị na -eme ememme nke ụwa, jikọọ aka n'ọgụ m na -alụ ọgụ na -agwụ ike, na -ekwesịghị ekwesị, nnukwu nfuli ojii na kapeeti uhie! N'ihi na obere akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ ọla edo nwere ike ịga ogologo ...
Ị chọrọ ịgụkwu egwu m?
Enyo enyo na ọkụ, ị na -emeghị ihe n'eziokwu
Obere ụkwụ na -aga ogologo ụzọ na kapeeti uhie!
Ụzọ ndị ọzọ iji nweta ịma mma:
Nweta mmelite kachasị ọhụrụ site na Twitter na @glamour_fashion
Lelee Tumblr ọhụrụ anyị mara mma!
Gụọ akwụkwọ akụkọ Glamor na iPad gị!
Dị ka freebies? Tinye ọhụrụ Glamour sweepstakes!
Debanye aha maka akwụkwọ akụkọ ejiji na mma anyị iji nweta ndụmọdụ ụdị dị mfe (ọ ga -eme igbe mbata gị 10x, anyị kwere nkwa).
Ma, ị maara na ị nwere ike gụọ glamour.com na ekwentị smart gị ?! Ọ bụ ihe na -agwụ ike na -agwụ ike.
Chọrọ ọbụna karịa STF? Soro anyị na Twitter!
Tweets kacha ọhụrụ!
Soro anyị na Twitter!
ngwaahịa nkịtị maka ikwe
usoro onyonyo ọhụrụ ga -ada 2018
vidiyo vidiyo kacha mma britney spears